Galmeewwan fuula baaqqee fi bay'eedhaf, akkasumas lakkoofsa kennuu fi dhangiilee waraqaatif teessuma fuulaa akka hiiktu si gargaara.
Tarree hammamtaa waraqaa durmurtawaa irraa fili ykn dhangii waraqaa maamilaa hiiki.
Hammamtaa waraqaa durmurtaawaa fili, ykn waraqaa sanduuqawwan Hojjaa fi Yabbinaa keessatti bal'inaa fi dheerina galchuun dhangii maamiloo uumi.
Yabbina dhangii waraqaa filatamee agarsiisa. Dhangii maamiloo hiikuuf, yabbina asitti galchi.
Hojjaa dhangii waraqaa filatamee agarsiisa. Dhangii maamiloo hiikuuf, hojjaa asitti galchi.
Galmee ammee kan waraqaan olee qabachiifame waliin jiru agarsiisuun maxxansa.
Galmee ammee kan waraqaan dalga qabachiifame waliin jiru agarsiisuun maxxansa.
Kallattii barruu galmee kee keessatti fayyadamuu barbaadde fili. Kallattiin yaa'iinsa barruu \_"mirgaa-gara-bitaatti (olee)\_" qindaa'ina teessuma maraa gara mirgaatti digrii 90'n naannessa, irraantoo fi miljaleen alatti.
Maxxansaa keetif madda waraqaa fili.Yoo barbaadde, sochii waraqaa garagaraa haalota fuula garagaraatti ramaduu dandeessa. Fakkeenyaf, sochii garagaraa gara haalata fuula jalqabaatti ramaduun sochii waraqaa xalayaa maqaa fiteessoo kubbaaniyaa kee waliin fe'i.
Hanga iddoo xiyyoowwan fuula fi barruu gallmee gidduu dhiisuuf ifteessi.
Iddoo duuwwaa muudana gubbaa fuulaa fi barruu galmee gidduutti dhiisuuf hanga isaa galchi.
Iddoo duuwwaa muudana jala fuulaa fi galmee barruu gidduutti dhiisuuf hanga isaa galchi.
Dhangii lakkofsa kennuu fuulaa kan haalata fuula ammeetif fayyadamuu barbaadde fili.
Title is: Fuula